TechSmith SnagIt 11.0.1 Build 93...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီနေ့ TechSmith SnagIt 11.0.1 Build 93 လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! ဒီကောင်လေးကတော့ Capture Software လေးပါ...! ဓါတ်ပုံလေးတွေပေါ်မှာ စာရေးချင်တဲ့ သူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်...!ဖော်ဂျီဖောင့်လည်းသုံးရတာ အဆင်ပြေပါတယ်..! ကျွန်တော် Serial Key ပါထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်...! စိတ်ဝင်စားရင်တော့ အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့လင့်က ယူသွားနိုင်ပါတယ်...!
" Minus..." " MediaFire..." ( 63.4 MB )
1 Response to TechSmith SnagIt 11.0.1 Build 93...!